Hlukanisa Okuphakelayo Kwakho Nezithombe | Martech Zone
NgeSonto, Okthoba 8, 2006 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Umngani wami nozakwethu, uPat Coyle, ungidlulisele isincomo ngebhulogi yami. Uthe enye yezinto ayiqaphelayo ukuthi ngihlale ngizinika isikhathi sokubeka umsebenzi ezithombeni kanye nokuqukethwe. Kuyiqiniso impela - into engiyenzayo ngokufaka ngakunye. Nayi inqubo yami esheshayo nelula:
Uma ngingenaso isithombe noma ividiyo yesihloko, ngibheka isiqeshana sobuciko bommeleli besiqeshana kumaMicrosoft's Isiqeshana indawo. Ngisesha ngisebenzisa iFirefox ukuze ngimane ngigcine i-gif yesithombe kudeskithophu yami ukuze ngiyilayishe kalula. Ukusebenzisa i-IE kukwenza udlule ohlelweni lobuciko beClip Clip neHhovisi… lusiza kuphela uma ufisa ukuhlela noma usayizi wesithombe kabusha.
Uma nginesithombe, ngivame ukusiletha ku-Illustrator bese ngizama ukusilinganisa ukuze silingane esikhaleni enginaso. Angizithandi izithombe ezincane kakhulu futhi zithatha isikhala esime mpo… Ngivame ukusebenzisa ukuqondanisa = kwesobunxele noma ukuqondanisa = kwesokudla ukuzibeka ngapha nangapha kokungena ukuze kungangeni endleleni yokufunda okufakiwe , kepha isengeza umbala kuyo.
Nasi esinye isizathu esenza ngingeze ubuciko besiqeshana: i-RSS. Lapho abantu bebhaliselwe kokuphakelayo kwami, ngifuna ukuzihlukanisa nami kuhlu oluvamile lokuphakelwa kombhalo abakuthola nsuku zonke. Ngizithola ngithwebula izindaba ezisematheni nokuqukethwe… kepha ngivame ukungazithathi izithombe engizibona kokuphakelayo.
Nasi isampula… yisiphi esidonsa ukunaka kwakho?
Hlukanisa okuphakelayo kwakho! Sebenzisa izithombe! Angikwazi ukunquma ukuthi lokhu kuholela ekwandeni kokufundwa noma kokugcinwa… kepha iqiniso lokuthi uPat uliqaphele lingenza ngizizwe sengathi kungenzeka.
UMosh wamaShukela Plums
Okthoba 12, 2006 ngo-3: 07 AM
Kuyiqiniso. Uma nje igcinelwe ubuncane - ngiyayithanda i-RSS ngoba iyayithanda i-dial-up yami 😉